Kana iwe uri munhu asinganzwisisiki, kufanana nekumira kunze kweboka revanhu, uye rock'n'roll uye disco clubs, shangu dzeEd Hardy dzakasikwa zvikuru iwe. Vongai pamifananidzo yavo, vanozivikanwa uye vanodiwa munyika yose. Kunyange nyeredzi dzenguva iyo iwe haufaniri kuenda pamwe chete nepeti yepepuru, anofara kupfeka shangu dzakadaro.
Muna 2004, kuburikidza nevakakurumbira muumbi wechiKristu Christian Odige, nyika yakaona zvisikwa zveimba itsva yemafashoni Ed Hardy. Imba inonzi zita rakakurumbira muchengeti wekudhirota Ed Hardy, uyo akave akakurumbira nekuda kwezvisikwa zvake zvinoshamisa uye zvinoshamisa. Ndiye iye akatanga kutanga kushandisa zvinyorwa zveJapan mumatoto. Uye akazviita zvakajeka zvokuti kusvikira zvino mifananidzo yake inokurudzira kusikwa kwemitambo mitsva, mafashoni ezvokupfeka, shangu nezvimwe zvinhu. Chimwe chimiro chisina kujairika uye chakaoma-tattoo yakave yakakurumbira pakati pevechidiki uye nyeredzi dzenyeredzi kuti chigadzirwa chiri kukura pane imwe nguva yakakwirira uye nhasi.
Zvichemo zvehomwe dzevakadzi Ed Hardy
Chimiro cheEd Hardy's shoe chakajeka uye chakakwana, saka zvakaoma kusazviziva uye kusazviona. Pane humwe hutano hunokosha hwekupenda kwehangu shangu:
Majeko nemakororo muJapan style;
Sneke dzevakadzikadzi Ed Hardy kakawanda dzinorongedzwa kwete chete nemaruva akajeka, asiwo nemicheka, izvo zvinoita kuti zvive zvakanaka uye zvinoshamisa. Vongai nekugadzirwa kwavo kwepakutanga uye kwakasiyana, zvipfeko izvi zvinonyanya kudiwa pakati pevechiri kuyaruka, uyewo vateereri vemapoka akasiyana-siyana.
Kazhinji kacho kazhinji shingaira sneakers yakagadzirwa nechembodo, pamwe nejasede. Iyi sarudzo yakakodzera kwechinyakare-yekuvhuvhu, uye yechando. Asi kwezhizha zviri nani kusarudza mishonga yemhando iyo ichava chiedza uye isingapisi kupisa. Uyezve, hunhu hwehushu hwakadaro hwakanyanya uye hunokwanisa kushambidzwa pasina kunetseka pamusoro pekuchengetedzwa kwechitarisiko chavo.
Nekupi kupfeka shangu dzeEd Hardy?
Ed Hardy's sneakers akafananidzwa zvakakwana ne jeans rakasakara kana mhando dzemabhuruku. Mufananidzo wacho unogona kuwedzerwa nehombodo yeganda, chikwata chechinyakare kana chiti mune imwe nzira. Vanobatanidza zvakanaka nemitambo. Chimiro chisingaoneki, mumugwagwa uye kunyange "kukakavara" - izvi zvose zvakanyatsobatanidzwa nezvipfeko zvakadai.
Sneakers rakanaka uye rakanakisa rinofunga pfungwa pamusoro pekusununguka, motokari yaColbert Davidson uye rock uye roll style . Uyu ndiwo mhando yemafungiro emweya weAmerica, kurota kwehupenyu hwemabhizimisi uye hukuru, pamwe chete nekutanga uye humwe hwevanhu.
Sutu tsvuku - 36 mapepa emifananidzo yakashongedza yezvokudya zvose muhomwe tsvuku
Yakachena mink fur coat ne hood
Uturu hwevakadzikadzi - mvere dzakanaka
Shati risina kupfeka
Cotton inopfeka yezhizha
Chikadzi gym shots kubva kuDKNY
Mwedzi unobata sei munhu?
Tetraborate sodium ye thrush
Bhuruu yebhuruu - iyo yakanakisa mitambo uye chii chaunofanira kupfeka?
Pasi pemitambo yemwana mumwedzi mitanhatu mukudya kwekugadzirira
Pergolas uye mabheji akaitwa nematanda eimba yezhizha
Myalgia - zviratidzo uye kurapwa kwemishonga
Mirairo yekufambisa mhuka muchitima
Shampoo chaiyo ine maoko ake
Gel yeziso - rubatsiro rwekutanga kune ganda rakasiyana
Ungatanga sei kutamba mitambo kumba kubva pakutanga?
Chidimbu chemafashoni - chii chaunosarudza uye chaunofanira kupfeka?
Sheltie - tsanangudzo yemarudzi
Madzimai Edzimba Sneakers
Ndezvipi shangu kuti ufuke jeans-boyfriend?
Kuchenesa gel nokuda kwechiso
Kugadzira nzvimbo imwechete yeimba
Pasita casserole nemafuta akanyanya
Nzira yekuzivikanwa sei pachikoro?